हामी भन्छौं, पार्टीको लाइन के हो त्यो त बताई दिनुस् (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » हामी भन्छौं, पार्टीको लाइन के हो त्यो त बताई दिनुस् (अन्तरवार्ता)
हामी भन्छौं, पार्टीको लाइन के हो त्यो त बताई दिनुस् (अन्तरवार्ता)
SAHARA TIMES Saturday, August 3, 20190No comments
–प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश २) एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, केन्द्रीय सदस्य
भारतबाट नेपाली केटासँग विहे गरेपछि उहाँले सोच्नु भएको थिएन कि ‘होलटाइमर’ राजनीतिककर्मी हुन्छु । सानोतिनो जागिर गरेर घर सम्हाल्ने सोच थियो उहाँको । तर एउटा घटनाले उहाँलाई राजनीतिकमा आकर्षण गर्यो र मधेश आन्दोलनदेखि मधेश राजनीतिकमा सक्रिय हुँदै आज प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यसम्म बन्नुभयो । हो , उहाँ हुनुुहुन्छ डा.रिना यादव । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य डा.यादव पछिल्लो समय मधेश राजनीतिमा निकै सम्भावना भएर आउनु भएको महिला हुनुहुन्छ । प्रदेश २ को संसदमा उहाँको प्रस्तुती र अडानलाई लिएर सर्वत्र चर्चा हुने गर्छ । आर्ट (कला) मा पिएचडी गर्नुभएका डा.यादव भारत वणारसका हुनुहुन्छ र उहाँको विहे नेपालको महोत्तरीमा भएको छ । प्रस्तुत छ, प्रदेश २ प्रदेशसभा र सरकारको कामकारवाही, अगामी योजना तथा राजपा नेपालको महाधिवेशन लगायतका विषयमा डा.रिना यादवसँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
प्रदेश २ मा तेस्रो वजेट आइसकेको छ । त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–तेस्रो वजेट आउनु अघि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो । त्यसमा केही कुराहरु नमिल्दा हामीले आफ्नो अडान लिएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं । हामीले पहिलो र दोस्रो वजेट हेर्यौं त्यसले हामीलाई लागेको थियो कि प्रदेश २ ले जुन सपना देखेको छ त्यो यसले पूरा हुन सक्दैन । त्यसैल आउने अगामी वजेट यो भन्दा अग्रगामी हुनैपर्छ । त्यही कारणले हामीले नीति तथा कार्यक्रममा त्रुटी देख्दा त्यसलाई सुधार गर्न भन्दै संशोनध प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं । प्रदेश २ बनाउन जुन सपना हेरेर हामी आएका थियौै, जनतालाई जुन आश्वासन र प्रतिवद्धता दिएर आएका थियौं त्यो अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आएको थिएन । यदि नीति तथा कार्यक्रम नै यस्तो छ भने वजेट कस्तो आउँला भनि हामी सहजै अनुमान गरेका थियौं र हामीले आफ्ना कुरा जवर्जस्त रुपमा राख्यौं । नीति तथा कार्यक्रम हेरेपछि हामीलाई लागेको थियो कि हामी काँग्रेसकै शासनमा छौ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु हामीमाथि शासन गरेको जस्तो लागेको थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुमा यति घमण्ड आइसकेको थियो कि कसैसँग कुनै कुरा सोधपुछ पनि गरिरहनु भएको थिएन । आफ्नो स्वार्थ अनुकुल अगाडि बढी रहनु भएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको शुरुवात राम्रो थियो यहाँसम्म कि उहाँले अमेरिकालाई समेत हलाई दिनुभएको थियो । केन्द्र सरकारमाथि उहाँको दवाव थियो । र हामीले उहाँको प्रस्तुतमा गर्व गर्थियौं । कमसे कम हाम्रो मुख्यमन्त्री यस्तो हुनुहुन्छ, जसले मधेशी जनताको हक अधिकारका लागि केन्द्रीय सरकारसँग सिधै पैठेजोरी खेलिरहनु भएको छ । तर विस्तारै ती सबै कुराहरु हराउँदै जान थाल्यो । साना साना कुरामा उहाँ फँस्दै जानुभयो । र त्यही लाइनमा प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीहरु पनि जान थाल्नुभयो । प्राप्त वजेटमध्ये १० प्रतिशत वजेट मात्र खर्च गर्न सक्यो प्रदेश सरकारले । एकातिर हामी भन्छौं कि संघीय सरकारले हामीमाथि विभेद गरेको छ ।
हामीले बुझाउने राजस्वको थोरै मात्रा संघीय सरकारले हामीलाई दिन्छ भनि हामीले दावी गर्छौ तर प्रदेश २ का सरकारले पनि त्यही गरिरहेको छ जो संघीय सरकारले गरिरहेको छ । हामीले जति वजेट पाएका छौं त्यो पनि हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौ भने दोष कसको केन्द्रको या प्रदेशको ? यसको जवाफ प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ । यो सब हेर्दा हामीलाई निकै निराशा लाग्छ । राजपा नेपाल र दुई नम्बरको सरकार कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, त्यो सरकार र राजपा बनाउन मधेशी जनताका खुन पसिना बगेको छ । र, ती जनताको बारेमा यो तेस्रो वजेटले केही सोचेको छैन ।
तपाई जुन कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसको आधारमा यो वजेट कार्यान्वयन सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
–हामी पाँचजना प्रदेश सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौं । त्यसमा मनिष सुमन र प्रमेश्वर साहले पहिलो दिनमै फिर्ता लिनुभएको थियो । नेत्र विक्रम साह, विक्की यादव र म, हामी तीनजनाले भन्यौं कि हामी यो तरिकाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने छैनौं । जबसम्म हामीलाई ठोस कुनै प्रतिवद्धता प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामीले फिर्ता लिँदैनौं । त्यसपछि पार्टीले एउटा समिति बनायो र त्यो समितिले हामीलसँग कुरा गर्यो । त्यो समितिले हामीलाई कन्भिन्स गर्न नसकेपछि त्यसलाई पनि हामीले इगनोर गर्यौं । हामीले उठाएको कुरालाई पार्टीका अध्यक्षमण्डलले अनुमोदन नगरेसम्म हामी यसबाट दयाँबायाँ हुनेछैनौं ।
त्यतिबेला अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झा हुनुहुनुहुन्थ्यो उहाँले तपाईहरुले उठाउनुभएको कुरा सही छ । तपाईहरु आफ्नो कुरा ठिकसँग राख्नुस् त्यसलाई हामी इन्डोर्स गर्छौ । अध्यक्षमण्डलका अन्य सदस्यहरुले पनि हाम्रो संशोधन प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउनु भयो । तर, जब बजेट आयो त्यसमा ती कुराहरु समेटिएन । जब वजेटमा छलफल शुरु भयो अनि मैले त्यहाँ पनि आफ्नो कुरा राखेका थिए कि यो अल्टिमेटम नै हो । यदि यसलाई (वजेट) सच्याउनु भएन भने अगामी दिनमा कुनै नकुनै कदम चाल्न हामी बाध्य हुन्छौं । अहिले सदन चलेको छैन । अगामी दिनमा केही परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनि हेर्न बाँकी नै छ । यदि गरेन भने हामी एकजुट भएर फेरि अवाज उठाउँछौं ।
तपाईहरु अवाज उठाउँदा उठाउँदै पनि त्यहाँका सरकारले गम्भीर्यता देखाएन भन्नुहुन्छ भने आउने दिन त्यो प्रदेशका लागि त्यति फलदायी देखिदैन, होइन ?
–हो ठिक भन्नुभयो । शुरुवात नै यस्तो छ भने आउने दिन कस्तो हुन्छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसमा उहाँहरुले राम्रो गर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास लाग्दैन । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो लागि किन यति कार्यक्रम राख्नुभएको छ मलाई थाह छैन । मुख्यमन्त्री भनेको सबैका लागि हो । उहाँले सबैलाई काम गर्न लगाउने हो । आफ्नै कार्यक्रम र वजेट लिएर जाँदैनन् । मुख्यमन्त्रीलाई यो कुरामा अल्झनु हुँदैन । मुख्यमन्त्री नै आफ्नो स्वार्थमा अल्झेपछि अन्य मन्त्रीले के गरुन् त । सबै मन्त्रीहरु आआफ्नो ट्रयाकबाट अलग हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले फस्ट वजेट राम्रो चलाउनु भएको थियो, सकेण्डमा अलि कम भयो र थर्डमा त गायबै नै हुनुभयो । मुख्यमन्त्रीमाथि कामको लोड ज्यादै भयो या उहाँलाई यो समझ छैन कि सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्यो । मुख्यमन्त्री एउटा कलेजको प्रिन्सिपल जस्तो हो ।
उहाँले आफै पढाउने होइन, उहाँले डाइरेक्सन दिने हो । नीति नियम बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो अनि मात्र सही शिक्षाको कार्यान्वयन हुन्छ । र, रिजल्ट राम्रो आउँछ । मुख्यमन्त्रीलाई यो कुराहरु थाह छ किनभने फस्ट राउण्डमा उहाँले राम्रो गर्नुभएको थियो । भौतिक मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्रदेश २ कृषि प्रधान प्रदेश हो तर त्यहाँ सिँचाईको केही कुरा गरेको छैन । त्यसमा खासै मतलब राखेको देखिदैन । दुखको कुरा यो हो कि भौतिकका वजेट पनि फ्रिज हुन्छ । यदि त्यो वजेट जिल्ला जिल्लामा समान किसिमले वितरण गरेको भए सायद कुनै समस्या आउने थिएन तर त्यस्तो पाइएको छैन ।
तपाईले उठाएका यी कुराहरु हामीले पनि त्यहाँका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग प्रश्न गर्दा उहाँहरुले संघीय सरकारलाई दोष देखाउनुहुन्छ कि हामीलाई काम गर्न दिइरहेको छैन । नीति निर्माण गर्न दिएको छैन, चाहिने जति कर्मचारी दिएको छैन अनि प्रदेश सरकारले कसरी काम गरुन् भनि उहाँहरुको भनाई हुन्छन्, के यो साँच्चै हो ?
–उहाँहरुको आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, काम दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यही कर्मचारीले सहयोग गर्छन् । र, अरुको क्षेत्रमा काम दिनुपर्यो भने त्यही कर्मचारीले असहयोग गर्छन् भने कसले पत्याउँछन् । संघलाई देखाएर प्रदेशका जनतालाई ठग्ने उहाँहरुको बहाना मात्र हो । हामीले यही भन्छौं कि तपाई काम गराउनमा सक्षम हुनुहुन्न भने ठाउँ खाली गरिदिनुस् । जो मन्त्री संघको कर्मचारीबाट काम लिनमा सक्षम हुन्छ त्यही मन्त्री त्यहाँ बसेर काम गर्छन् । हामीले भन्यौं, तपाईको एक्सक्युज सुन्नका लागि हामी यहाँ बसेका होइनौं । संघले मधेशलाई ढाँट्ने काम गर्यो, गर्यो । अब तपाईहरु पनि ढाँट्ने काम गर्न थाल्नु भएको छ ।’ अहिले त हामी ‘करना है या मरना है’ को पोजिशनमा छौं । यदि हामीले यतिबेला पनि मधेशका लागि केही गर्न सकेनौं भने हामीलाई धिक्कार छ ।
तपाईको विचारमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको आरोप जस्तो संघको कुनै दोष छैन ?
–हो मैले पनि देखेको छु कि संघबाट पठाएका कर्मचारी यहाँ टिक्दैनन् । आउँछन् अनि केही दिनमै भाग्छन् । त्यसको पनि एउटा उपाय छ । एउटा कुनै प्रकृयामा बाँधिसकेपछि त्यो सधैका लागि हुन्छ । संघले कर्मचारी पठाएपछि प्रदेश सरकारले आन्तरिक रुपमा एउटा कुनै नियम बनाउनुपर्छ जसले उहाँहरु आएपछि त्यसमा बाँधियोस् । तर त्यस्तो गर्दैनन्, खाली केन्द्रलाई दोष देखाएर बसेका हुन्छन् । त्यसैलाई बहाना बनाएर जनतालाई ठग्न पाइदैन । त्यसका समाधान खोज्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको आफ्नो कामका लागि त्यही सचिव तथा कर्मचारी साथ दिन तयार हुन्छन् तर अरुको कामका लागि त्यही सचिव र कर्मचारी बहाना बन्छ कसरी ?ः आजसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको आफ्नो कुनै काम कर्मचारीका कारण रुकेको छ भने देखायइ दियोस् हामी त्यसका लागि पनि बोल्छौं । तर अब बहाना चल्दैन ।
तपाई सत्तापक्षका सांसद हुनुहुन्छ तर प्रतिपक्षि जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ । पार्टीको पनि ‘रुल रेगुलेशन’ हुन्छ सरकारले गरेको कामलाई सघाउने काम नेताको पनि हो तर तपाईबाट त्यस्तो भइरहेको देखिदैन । पार्टीले यसको बारेमा तपाईलाई केही भन्छ कि भन्दैन ?
–हाम्रो पार्टीले भन्छ, ‘पुरै इमान्दारीका साथ जनताका लागि काम गर्नुस् ।’ हामीले कुनै पर्टिकुलर मन्त्रीका लागि सपथग्रहण गरेको छैनौ त्यहाँ, कि उहाँहरुले जेजे भनुन् र हामीले त्यसमा हँ मा हँ मिलाउँदै जाउँ । मैले त्यहाँ जनता र पार्टीका लागि सपथ लिएको छु । पार्टी अहिले पुरै सिस्टममा आएको छैन त्यही भएर केही समस्या देखिएको छ । पार्टी ठिक ढंगले अगाडि बढ्यो भने यी समस्याहरु देखिदैन । बरु प्रदेश संसदीय दलका नेताबाट हामीलाई थ्रेट भइरहेको हुन्छ कि तपाईहरु पार्टीको लाइनभन्दा अलग गइरहनु भएको छ ।’ तर हामी भन्छौं कि पार्टीको लाइन के हो त्यो त बताई दिनुस् । हामीलाई पार्टीले जे लाइन दिएको छ त्यो अनुसार चलिरहेका छौं । जनताका लागि काम गर्न भनेको छ जनताका लागि हामी गरिरहेका छौं । यदि पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गएको छु भने पार्टीले भनोस् म सुधार गर्न तयार छु तर जहाँ पार्टीका नेता, मन्त्री, सांसदले यदि गल्ती गर्छन् भने त्यहाँ म अवाज उठाउँछु ।
हामीले थाह पाए अनुसार त्यहाँ समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदको बीचमा विभेद गरिएको छ, तपाई समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?
–हो त्यहाँ विभेद भएको छ । मैले नै भोगेको छु । पहिले समानुपातिक र सांसदमा कुनै विभेद थिएन तर अहिले प्रदेशमा सिधै विभेद भइरहेको छ । समानुपातिकबाट आएको होस् या प्रत्यक्षबाट आएको होस् सबैको काम कर्तव्य र अधिकार एउटै हुन्छ तर प्रदेशका सरकारले विभेद गरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष सांसदलाई यस्तो लाग्छ कि आफू अरेञ्ज म्यारेज गरेको दुल्हा जस्तो हुँ । र, समानुपातिक संसद भागेर लभ म्यारेज गरेको जस्तो । प्रत्यक्ष सांसदलाई लाग्छ कि म यति सुपेरियर छु, मसँग यति भोट छ, म जनताबाट चुनिएर आएको छु ।’ समानुपातिक सांसदसँग त्यस्तो केही छैन । उ त भागेर विहे गरेको दुल्हा जस्तो । जनताबाट चुनिएर आएको छैन । जनताले पत्याएको छैन भनेर त्यसखालको व्यवहार हामीसँग गरेका हुन्छन् । म आफूमा हरेक कुरामा प्रफेक्ट छु । जनताप्रति जिम्मेवार छु । जनताका लागि बोल्छु ।
जनताका लागि काम गर्छु । संसदमा अवाज उठाउँछु । विकासका योजना पनि बनाउँछु । अर्थात म प्रत्यक्षभन्दा कुनै कुरामा कम छैन अनि विभेद किन ? प्रत्यक्ष सांसद मतदानामार्फत आउनुहुन्छ भने समानुपातिक पनि मतदानकै मार्फत आएका हुन्छन् । प्रत्यक्षबाला त एउटा चुनाव क्षेत्रको मतबाट जितेका हुन्छन् तर समानुपातिकबालासँग देशभरको मत हुन्छ । समानुपातिक सांसद पनि मत माग्नका लागि गाउँ गाउँ घुमेका हुन्छन् । प्रत्यक्षलाई जिताउनका लागि पुरै मेहनत लगाएका हुन्छन् । प्रत्यक्ष सांसदलाई जिताउन समानुपातिक सांसदको पनि योगदान हुन्छ अनि विभेद किन ? ९० प्रतिशत वजेट फ्रिज हुन्छ भने त्यही रकम प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदमा विभेद नगरि सबैलाई बराबर गरि बाँडेको भए, समानुपातिक बाला पनि आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्न सक्छ । तर प्रत्यक्ष सांसदलाई रकम बाँडेको हुन्छ र त्यही समानुपातिक सांसदमाथि विभेद गरेको हुन्छ । समानुपातिक सांसदले पनि आफ्नै क्षेत्रमा खर्च गर्छन् नि आफ्नो घरमा त गर्दैनन् । कही गर्छन् आफ्नै जनताकै लागि गर्छन् ।
तपाईको विचारमा दुई नम्बर प्रदेशमा के के गर्नुपर्छ ?
–प्रदेश २ लाई नमुना प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यो असम्भव पनि छैन । अहिले सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो कर्तव्य अहिलेसम्म थाह भएको छैन । स्थानीय सरकारको एउटै ध्येय हुन्छ कि प्रदेश सरकारलाई तल देखाउ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्यो भने प्रदेश निर्माणमा समय लाग्ने छैन तर त्यहाँ समन्वयको अभाव देखिएको छ । स्थानीय सरकारले एक्लै विकास गर्न सक्दैन । प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्यो भने विकास राम्रो हुन्छ । शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्छ । पहिलाको मधेश शिक्षित मधेश थियो । मधेशले पहाडलाई पढाएको थियो । तर अहिले उल्टा भएको छ । अहिले पहाड शिक्षित भएको छ तर मधेश अशिक्षित हुँदै गइरहेको छ । स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै समस्या छ । प्रदेश २ को स्वास्थ्य अवस्था कर्णाली भन्दा कमजोर छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि हो । कृषिमा सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि भन्दा अरु कुनै उपाय नै हुन सक्दैन । कृषिका यस्ता धेरै कुरा छन् जो जनताको पहुँचमा छैन । सरकारले अनुदान दिएको हुन्छ तर जनतालाई थाह हुँदैन । नेता तथा ठूला व्यक्तिले नै त्यसको फाइदा उठाउँछ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । तर प्रदेश २ का सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिएको छैन ।
राजपा नेपाल बनेको दुई वर्ष भयो तर अहिलेसम्म व्यवस्थित हुनसकेको छैन त्यसको कारण के हुनसक्छ ?
–यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने शुरुमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुले महन्थ ठाकुरलाई सर्वसम्मतीले संयोजक बनाउनुभयो । र, उहाँले लामो समयसम्म संयोजक बनेर काम गर्नुभयो । त्यतिबेला देखि नै राजपा नेपाल बिग्रेको हो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा जथाभावी निर्णय गरेको कारण पार्टी व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अहिले दुई–दुई महिनामा संयोजक फेरिदैछ । अलि अलि व्यवस्थित हुने देखिएको छ तर यो दुई–दुई महिनामा संयोजक फेरिनु पनि राम्रो होइन । कुनै संयोजकले काम गर्न खोज्नुहुन्छ । त्यसको तयारी शुरु हुन्छ, जब काम प्रकृयामा जान्छ अनि संयोजक फेरिन्छ । अर्को संयोजक आएपछि फेरि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ । त्यसले पनि कतै नकतै पार्टी व्यवस्थापनमा समस्या गरेको छ ।
राजपा नेपालमा यति नेता छन्, यति कार्यकर्ता छन्, यति ठूलो दल बनेको छ तर दुई नम्बरमा मात्र किन सिमित भएको छ ?
–हो एउटा समस्या छ । यो समस्या समाधानका लागि जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तबसम्म समाधान हुँदैन । एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टीले एकखालको लाइन लिन्छ र देशभरि अभियानकै रुपमा संगठन विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ । हामी मधेशमा मात्र सिमित रहन चाहदैनौं । हामीले पहाडलाई पनि जोड्न चाहन्छौं । हिमाल, पहाडका जनता पनि यसमा जोडिएका छन् । विभिन्न साना दलहरुसँग एकीकरण पनि भइरहेको छ । समाजवादी पार्टी, नेपालसँग पनि एकीकरणको कुरा भइरहेको छ । मधेशी जनताको चाहना पनि यी दुई दलको बीचमा एकीकरण होस् । तर पदाधिकारी अर्थात अध्यक्ष कसरी कसलाई राख्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । चाँडै नै कुरा मिल्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले महाधिवेशनपछि हामी राष्ट्रिय रुपमा जान्छौं भनि विश्वास छ ।